indrindra tamin’ny fihaonana 1/4-dalana tamin’ny Tonizianina ny alakamisy 11 jolay teo tany amin’ny kianjan’i Al Salam Stadium any Le Caire Egypte. Tsorina fa izy no mpilalao anisan’ny ankafizin’ny vehivavy Malagasy indrindra amin’ireo mpikambana ao amin’ny ekipan’ny Barea.
25 taona ny lehilahy ankehitriny fa teraka tany Le Port La Réunion tamin’ny 30 aogositra 1993. Manambady fa tsy mbola niteraka. Mizaka ny zom-pirenena Malagasy sy Frantsay, manana halavana 1,83 m, milanja 84 kg. Milalao ao amin’ny ekipan’ny Fc Matigues any Frantsa ankehitriny ary efa in-9 izao no voaantso handrafitra ny Barean’i Madagasikara.Voaantso tao amin’ny Barea nanomboka tamin’ny taona 2017 tamin’ny fihaonana tamin’i Comores (11 novambra 2017). Handray ny mari-boninahitra fankasitrahana miaraka amin’ireo namany mandrafitra ny Barea eny amin’ny lapan’Ambohitsorohitra izy anio ao anatin’ny handraisan’ny filoham-pirenena Andry Rajoelina azy ireo sy hiarahany misakafo amin’izy mivady ihany koa.